आफ्नै आमा, दिदीबहिनी, छोरीबाट देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा देख्ने पितृसत्ताका पुजारी छोरा, बाउ, दाइभाइलाई जन्माउने आमा, भाइटीका गर्ने दिदीबहिनीले के सोचिरहेका होलान् ? जनतालाई सुरक्षा खतरा देख्ने सरकार र राज्यले कहिल्यै पनि प्रगति गर्न सक्दैन।
सरिता गिरिजस्ता तीनचार जना अरू भाउजूहरू आए भने त पूर्वपश्चिम राजमार्ग तलको पूरै इन्डिया हो भन्नेछन्, हजुर।
गृह मन्त्रालय भन्छ– मलामी १५ जना मात्रै जानू। तर, नेकपाको प्रशिक्षणमा सय जनाको भेला ? कि कोरोनाले नेकपाका कार्यकर्तालाई चिन्छ, बेसारवाला इम्युनिटीधारी हुन् भनेर ?
भाइरस चिनियाँ भएकाले नछुने होला।
देशका सीमाहरू हिंस्रक चिज हुन्। नागरिकता त्यही हिंस्रक स्थापत्यको दसी। शंकै छैन, यो पितृवादी दसी हो। म हरदम यस्तो संसार कल्पन्छु, जहाँ पृथ्वीका सप्पै मान्छे नागरिकताका खोस्टा हु¥याएर आफूलाई केवल मान्छे भनाऊन्। तर, यो केवल कविकल्पना हो। कुनै दिन यस्तो हुनेछ, तर त्यतिखेर हामी हुनेछैनौँ।
हो त, साम्यवादमा त्यस्तै हुनेछ। यसमा त कसैले विवाद गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ। देशमा धेरै गरिबहरू छन्, तपाईंको सम्पत्ति बाँड्न सक्नुहुन्छ ?सक्नुहुन्न। प्रणालीमै खराबी भएपछि तपाईंले सम्पत्ति बाँडे पनि गरिबी मेटिँदैन। अहिलेको आवश्यकता सम्पत्ति बाँड्नु होइन, राख्नु हो।
भीम रावल, पीएचडी
निहित सत्ता स्वार्थका कारण केही दल, नेता र मानिस बारम्बार नागरिकतासम्बन्धी कानुन कमजोर पारेर नेपालमा विदेशीले सहजै नागरिकता पाउने स्थिति बनाउन लागिपर्दै आएका छन्। यसो गर्नु देशलाई कमजोर बनाउनु हो। नागरिकता कानुन सबै देशले आफ्नो स्वतन्त्रता र हित रक्षा गर्ने गरी ल्याउँछन्।
सात वर्ष नेपालमा बिनाकागजात बाँचेर देखाउनुस्, तपाईंको राष्ट्रवादको गुलामी गर्नेछु। अरूको जिन्दगीलाई नर्क बनाउन खोज्ने कस्तो हो यो तुच्छ राष्ट्रवाद ?